निर्वाचनसम्म अब ओली नेतृत्वकै सरकार कायम रहने! « Sagarmatha Daily News
निर्वाचनसम्म अब ओली नेतृत्वकै सरकार कायम रहने!
सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ। प्रधानमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले अब आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन्।
सर्वोच्चको आदेशपछि यो मन्त्रिपरिषदलाई प्रधानमन्त्रीले चलाउन नसक्ने भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विघटनपछि नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई एमालेले अप्रत्यासित बताएको छ भने विपक्षी दलमा खुसियाली छाएको छ। पछिल्लो समयमा भएका सर्वोच्चका फैसलाले राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शीतयुद्ध चलेको छ। यो आदेशलगायत नागरिकता अध्यादेश, सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायतका पदार्थको उत्खनन् र निकासी गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोक लगाइदिएको छ।